1, Usuku lokuqala lwenyanga yokuqala engabizwa ngokuba nguMnyhadala weNtwasahlobo kumaxesha amandulo, kodwa wabizwa ngokuba ngumhla woNyaka oMtsha. 2, Kwimbali yaseTshayina, igama elithi "uMnyhadala weNtwasahlobo" ayingombhiyozo, kodwa ibhekisa ngokukodwa "kwiNtwasahlobo yeTwasahlobo" ye-24 yelanga ...
Siyavuyisana ne-11kv kunye ne-33KV yenguqu yethu yangoku kunye neevolthi ezihambisa uvavanyo lweKEMA
I-KEMA sisifinyezo saseDatshi (uKeuring Van Elektrotechnische Materialen). Ububanzi beshishini le-KEMA buye banda, kwaye baba ligunya elizimeleyo elizimeleyo kushishino lweenkonzo zamandla zehlabathi. Kuba iminyaka engaphezu kwama-80, KEMA sele ukunceda abathengi ukuqikelela kwicala utshintsho kunye s ...
Ngaphandle 33kV 35kV 36kV 1250A Umshini weSekethe yokuPhula kunye neTransformer yangoku
Ngaphandle 33kV 35kV 36kV 1250A Umshini weSekethe Breaker enesiguquli. Ngaba ungasebenza kakuhle kubushushu obufutshane: -40 ℃ ~ + 40 ℃. Ulwakhiwo olulula, ulondolozo lwasimahla kunye nobomi benkonzo ende busetyenziswa kwinqanaba levolthi ye-35kV, kubandakanya imigca ephezulu, amashishini amashishini kunye nezemigodi, izitishi zamandla, isin ...
Kutheni le nto imitha kufuneka ixhotyiswe ngesiguquli? Oku ukunqanda ukutshisa imitha kunye nokonga imali. Ngokumalunga nokonga imali, ixabiso lemitha encinci yangoku kunye nesiguquli liya kuba sezantsi kunelo lemitha enkulu yangoku. Ukusuka kwimbono yokhuseleko lwemitha yombane ...
Umshini ongaphandle wesekethe
ngomphathi ku 20-06-19
Kwisekethe, ikhefu lesekethe lisebenza njengefuse, kodwa i-fuse inokusebenza kube kanye, ngelixa ii-breakers zesekethe zingasetyenziswa ngokuphindaphindiweyo. Logama nje okwangoku kufikelela kwinqanaba eliyingozi, kunokubangela kwangoko isekethe evulekileyo. ucingo live kwisekethe elidityaniswe kuzo zombini iziphelo sw ...
Iimpawu zokuphuma kwefuse
(1) izibonelelo eziphambili zokuyeka ukusika i-fuse, ukukhetha okuhle. Logama nje umda okaliweyo wefayile yefuse yomgangatho ophezulu kunye nomgangatho osezantsi uhlangabezana neemfuno ze-1.6: 1 umlinganiso okhethiweyo wokukhetha ochaziweyo kumgangatho kazwelonke kunye nomgangatho we-IEC, oko kuthetha ukuba umda okhoyo ...
I-COVID-19 sisifo esitsha esosulela abantu abangaphezulu kwesigidi esinye kwihlabathi liphela!
Inokudluliselwa isuka komnye umntu iye emntwini. Le ntsholongwane ikholelwa ukuba idluliselwa ikakhulu kumntu emntwini. Phakathi kwabantu abasondeleyo (malunga ne-2m). Amathontsi okuphefumla aveliswa ngumntu osulelekileyo xa ekhohlela, ethimla okanye ethetha. La mathontsi amanzi anokuwela emlonyeni okanye empumlweni ...
Amagqabantshintshi Umshini wesekethe
ngomphathi ku 20-03-11
Ukuqaliswa kwe-Vacuum circuit breaker "I-Vacuum Circuit Breaker" ifumana igama layo ngenxa yokuba i-arc yayo yokucima kunye ne-insulation medium ye-gap gap emva kokucima i-arc zombini ziphezulu; inezibonelelo zesayizi encinci, ubunzima bokukhanya, ezilungele ukusebenza rhoqo ...